ဆရာ တိုက်စိုး ရေးသားသော ၀သုန္ဓရီနှင့် ရိုးရာအထိမ်းအမှတ်များ စာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၇၂တွင် တွေ့ရသော စိတ်ပုတီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆရာ တိုက်စိုး ရေးသားသော ၀သုန္ဓရီနှင့် ရိုးရာအထိမ်းအမှတ်များ စာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၇၂တွင် တွေ့ရသော စိတ်ပုတီး
ဆရာ တိုက်စိုး ရေးသားသော ၀သုန္ဓရီနှင့် ရိုးရာအထိမ်းအမှတ်များ စာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၇၂တွင် တွေ့ရသော စိတ်ပုတီး
Posted by ဥာဏ် မျိုးဆက် on Aug 28, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
ပုတီးကို ဘာသာရေး လူမှုရေး နှစ်ထေ အသုံးပြုခဲ့ကြလေသည်။ ရှေးခေတ်ပီရူးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံများတွင် ချည်ကြိုးနှင့် အထုံးပုတီးပြုလုပ်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာသဘော အသုံးပြုတတ်ကြလေသည်။ တဖန် ဗြဟ္မဏ-ဟိန္ဓူ၊ ဇိန၊ ခရစ်ယာန်၊ မွတ်စလင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် အာရုံ၌ စွဲမြဲတည်တံ့စေရန်၊ စိတ်နှိပ်ကွပ် ဆုံးမရန်၊ သတိတရား ချွတ်ယွင်းမှု ကင်းစေရန် (သစ်စေ့၊ ၀ါး၊ ကျောက်၊ ဖန် စသည်) ပုတီးကို စိပ်ကြ အသုံးပြုတတ်ကြလေသည်။
စိတ်ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ စိပ်ပုတီး စတင်အသုံးပြုသူများသည် အာရိယန်လူမျိုး ဗြဟ္မဏ-ဟိန္ဓူဘာသာဝင်များ ဖြစ်ဟန်တူလေသည်။ သူတို့သည် ကိုးကွယ်ရာ နတ် ဗြဟ္မာတို့၏ဂုဏ်ကို ရွတ်ဖတ်သဒ္ဓါပွားကာ ပုတီးစိပ်ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္သကရိုက်ဘာသာဖြင့် ပုတီးကို ဇပမာလာ(ရွတ်ဆိုခြင်း၊ ပန်းကုံး)ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ သမဏိ(သတိ၊ ပုတီး)ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်တွင်သည်။
ဗြဟ္မဏ-ဟိန္ဓူ၊များအထဲမှ ဗိဿနိုး ဂိုဏ်းဝင်များသည်လည်း ၁၀၈လုံးရှိသော ပုတီးကို သုံးလေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကြလေသည်။ ရှေးကာလက ဂါထာမန္တန်များကို ၇အုပ်ကစ၍ ၁၀၀၀အထိ ရေတွက်လေ့ရှိရာ ၁၀၈အုပ် စုပ်ခြင်းစိပ်ခြင်းသာလျှင် များစွာအသုံးရှိကြောင်း၊ ပဓာနကျကြောင်းလည်း ဆိုကြလေသည်။ တစ်ဖန် ၆နှစ်၊ ၇နှစ်သား ကလေးသူငယ်များကို ဗိဿနိုးဂိုဏ်းသို့ သွတ်သွင်းသည့် အစီအရင်တွင် ဆရာဂုရုလုပ်သူက ထိုကလေးများ၏လည်ပင်းနားကပ်ကာ လှည့်ပတ်ကာ ပုတီးကို ပြသရိုးရှိလေသည်။ ဇာတ်ကြီးသော ဗြဟ္မဏ-ဟိန္ဓူများမှာမူ ပုတီးကိုင်သောလက်ကို လူသူမမြင်အောင် (ဂေါမုခ) အိတ်ထဲထည့်၍ ပုတီးစိပ်တတ်ကြလေသည်။
ပုတီးကို အဆောင်သဘောမျိုးလည်း သုံးတတ်ကြသေးသည်။ သုံးပုံမှာ သားယောက်ျားအလိုရှိသူ များသည် ဆိုင်ရာမန္တန်စုပ်၍ ပုတီးတစ်မျိုးကို စိပ်တတ်ကြလေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ဆိုရသော်ကား စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း ပုဒ်ရေ ၅၂၀တွင်-
– သုံးလူများထိပ်၊ ငါးမာရ်နှိပ်၊ စိတ်ရန်ပုတီး ရှိလိမ့်နည်း-
ဟူသော ကျည်းကန်ရှင်ကြီး၏အမေးကို ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော်က ပုတီးရှိကြောင်း ကျမ်းဂန်၌ မတွေ့ဖူးချေ။
အကယ်၍ ပုတီးဆောင်တော်မူသည်ဖြစ်အံ့၊ ထိုပုတီးကို မည်သည့်ဒါယကာလှူသည်၊ မည်သို့ သုံးဆောင်တော်မူသည်၊ မည်မျှလောက် အကျိုးရှိသည်၊ မည်သည့်ရဟန်း အမွေခံရသည်ဟု ကျမ်းဂန် လာရာ၏။
ယင်းသို့ မလာသောကြောင့် ဘုရားမှာ ပုတီးမရှိဟူ၍ သိသင့်သည် ဟု အဖြေပေးခဲ့လေသည်။ ဤတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာကို နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း အောက်မေ့ဆင်ခြင် စီးဖြန်းရေတွက်ခြင်းအမှု ရှိလေသည်။ သတင်းသည်များသည်လည်း စိတ်ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းအကျိုးငှာ ပုတီးကို အကူအညီအထောက်အပံ့သဘောဖြင့် တစ်စတစ်စ အသုံးပြုလာကြလေသည်။
ထိုအခါ ဘုရားဂုဏ် ၉ပါး၊ တရားဂုဏ် ၆ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ် ၉ပါး ရည်၍ ၂၄လုံး၊ ဒွတ္တိံသကာယကိုရည်၍ ၃၂လုံး၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ရည်၍ အလုံး ၄၀စသည်ဖြင့် အလုံးအမျိုးမျိုးထား၍ သုံးတတ်ကြလေသည်။ ရံဖန်ရံခါ ၁၀၈လုံးထား၍လည်း သုံးတတ်ကြလေသည်။ ၁၀၈လုံးသုံးပုံနှင့်စပ်၍ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရေတွက်ပြတတ်ကြ လေသည်။ ပြပုံမှာ-
ဘုရားဂုဏ် ၄၈၊ တရားဂုဏ် ၄၈၊ သံဃဂုဏ် ၂၂ ပေါင်း ၁၀၈ဟူသော ရတနာသုံးပါးဂုဏ် အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း
သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ဖွားခါစတွင် ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏား ၁၀၈ဦးအား နန်တော်ခေါ်၍ လက္ခဏာဖတ်စေခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ တိဗက်ပိဋကတ်တော် ကန်ဂျူတွင် ၁၀၈ထုပ်ရှိသည်ကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ-ယိုးဒယားရှိ ဘုရားခြေတော်ရာတွင် စက်လက္ခဏာ ၁၀၈ကွက်ရှိသည်ကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ သတ္တဗီသနက္ခပတ် ၁၀၈ န၀င်းကို အကြောင်းပြု၍သော်လည်းကောင်း ၁၀၈လုံး ထားလေသည်ဟူ၏။ ။
၁။ ပုဂံဝန်ထောက် ဦးတင်။ “စိပ်ပုတီး အတ္ထုပ္ပတ္တိ” မဟာဒဂုန် မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် ၁၀၈(ဧပြီ ၁၉၆၃) စာ ၃၆၅-၃၇၃
၂။ စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း။ မန္တလေး၊ ပိဋကတ်တော် ပြန့်ပွားရေး ဌာန၊ ပထမတွဲ။
၃။ “Rosaries”, Encyclopedia of Religion & Ethic; ed. By James Hastings. Vol. 10 (1930) pp. 847-853.
၄။ M. Monier-Williams, A Sanskirt-English Dictionary. Enlarged by e. Leumann & C. Cappeller. Oxford Clarendon Press 1951.
ပုတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျုပ်အထင်ကတော့ သမ္ဗုဒ္ဓေ အခေါက်တစ်ထောင်ရွတ်ရင် ထွက်ရပ်ပေါက်တဲ့ ခေတ်မတိုင်ခင် ပုတီးပေါ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်
ဗြဟ္မဏ-ဟိန္ဓူ၊များအထဲမှ ဗိဿနိုး ဂိုဏ်းဝင်များသည်လည်း ၁၀၈လုံးရှိသော ပုတီးကို သုံးလေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကြလေသည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲ.. ဟိန္ဒူအယူတွေဘယ်လောက်ရောနှောနေသလည်း ဆိုတာရဲ့.. လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့.. အထောက်အထားတခုလို့ ယူဆပါတယ်.
ထေရ၀ါဒ ခေါင်းဆောင်ကြီးများလည်း သိကြပါသည်။ ပုတီးသည် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ လမ်းညွှန်ချက် မဟုတ်ကြောင်း။ သို့သော် တပည့်အများစု၏ အကြိုက်ဆောင်ပြီး မပြောပဲ ရှိနေကြပါသည်။ ပြောသည့် ဆရာတော်မှာ အလွန်နည်းပါသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ပုတီးစိပ်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ဘူး၊ ဘုရားဟောဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောသူကိုယ်တိုင် တဖက်စွန်းရောက်နေပြီထင်တယ်။ ဘုရားလက်ထက် မသုံးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပရိက္ခရာအသုံးအဆောင်ထဲ မပါတာလည်း လက်ခံနိုင်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ပဲ ဟိန္ဒူဖြစ်ရောလား…။ ပုတီးကို ဘယ်လိုအသုံးချသလဲ အပေါ်သာ မူတည်ပါလိမ့်မည်။
ပုတီးကို ဘယ်လိုအသုံးချသလဲ အပေါ်သာ မူတည်ပါလိမ့်မည်။”
အပေါ်က ဦးကြောင်အဆိုကို ထောက်ခံပါတယ်
ပုတီး ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ …
တစ်ခု ကြားဖူးတယ်ဗျ ..
“ဒို့များ တစ်သက်လုံး စိပ်မှ ပုတီး သုံးလုံးပဲ ကျတယ်” ဆိုလားပဲ …
ကြားဖူးတာလေး ပြောဒါဘာ .. အဟီးး
ပုံ/ အမည်မသိ ရှေးစာဆို
အင်း ဒီလိုအချိန်မှာမှ မိုးပြာဆရာတို့ အကြိုက်ပေါ်လာတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပဲ။ ကျနော်လည်း ဆွေးနွေးချင်တယ်။ အဲဒီတော့ မဆွေးနေွးခင် ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အမြင်လေးကို ပြောပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ အခုဟာက အချက်အလက် သက်သက်ပါ။ ဒီအပေါ်မှာ ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အမြင်လေး သိချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်တဲ့ပို့စ်ကို ကိုယ်ပြန်ဖြေရဲမယ် လို့ထင်လို့ပါ။ အပေါ်က သမိုင်းမှတ်တမ်း ကျန်စေကြောင်းဆိုတဲ့ ဆရာကြီးကိုလည်း ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။
ဥာဏ် မျိုးဆက် says:
ကျနော် တဆင့် ကူယူတင်ပြတဲ့ ဆောင်းပါဟာ San Hla Gyi ပြောသလို မိုးပြာအကြိုက်လား၊ အပြာမကြိုက်တဲ့သူတွေ အကြိုက်လားတော့ မသိဘူးဗျာ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်း ရေစီးကြောင်းကဲ့သို့ စီးဆင်းသလို၊ ဘာသာရေးတွေလည်း ရေစီးကြောင်းကဲ့သို့ စီးဆင်းနေပါလားလို့ သိလိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လိုပဲ ပြုမူနေထိုင်ကြပါစေ။ လူသားငြိမ်းချမ်း၊ တိုးတက်နေမယ်ဆိုရင် ကောင်းသောလုပ်ရပ်လို့ မြင်ပါတယ်ဗျာ။ ပုတီးကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပင်မ အလေ့အထ(အမူအကျင့်) မဟုတ်ဆိုတာကတော့ လက်ခံပါတယ်။
ကျနော် Question mark ပြထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဆက်ဆက် ပြန်ဖြေပေးပါ။ မေးခွန်းတွေက သိပ်ရှင်းပါတယ်။ မရှင်းသေးရင် နောက်တကြိမ် ထပ်မေးပါမယ်။ အခုမှ စာရေးသူ ကလောင်နာမည်ကို ကလစ်နှိပ်ကြည့်ပြီး အရင်ပို့စ်တွေကို ပြန်ကြည့်တော့လည်း ဒီလိုပို့စ်တွေကြီး ပါပဲလား။
အင်း အခုလို ပြန်ဖြေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။ ပထမဦးဆုံးပေါ့။ ဆောင်းပါးရှင်ဟာက စကတည်းက ယာဉ်သကို ဆိုသလို စပြောကတည်းက တဆင့်ကူးယူတင်ပြတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ရေးသူနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ အမှန်က မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ဆီကပဲ ကူးယူတင်ပြတယ်လို့ ပြောပြော ရေးသူရဲ့ သဘောထားက ပါရပါမယ်။ ဒါကြောင့် မဆွေးနွေးခင် ရေးသူရဲ့ သဘောထားကို အရင်မေးတာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ရေးပြီ ဆိုကထဲက ဒါကို နှစ်သက်တယ်လို့ ယေဘူယျ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက အငြင်းအခုံ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပါ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ပုတီးက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ပင်မအမူအကျင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒါက ကောင်းသလား ဆိုးသလား?။ ပုတီးစိပ်သူတွေကို ရှုတ်ချသင့်သလား ဒါမှမဟုတ် လက်ခံသင့်သလား?။ အဲဒီအပေါ်မှာ အမြင်ဘယ်လို ရှိပါသလဲ?။ ခင်ဗျားရေးတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ မေးတာပါ။ yes or no အဖြေလေးတွေနဲ့ စာရေးသူရဲ့ သဘောထားကို ပြောပြပါ။ မေးခွန်းတွေက သိပ်ရှင်းပါတယ်။
ကျန်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလဲ critical ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မဆွေးနွေးခင် စာရေးသူရဲ့ သဘောထားကို အရင်မေးတာ ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို လေးစားတဲ့ အနေနဲ့ပေါ့။ မဟုတ်ဘူးဆို ကိုယ်တွေကငြင်းပြီး ပို့စ်ပိုင်ရှင်မှာ ဘာသဘောထား ရှိမှန်းမသိဘူး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှ တခေါက်ပြန်လာခဲ့မယ်။ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေပြီးပြီလားလို့ လာကြည့်အုံးမယ်။ ခင်ဗျားဆောင်းပါး ရေးသလောက်တောင် အထောက်အထားတွေ ရှာစရာ မလိုပါဘူး ဆောင်းပါးရှင် မိတ်ဆွေရယ်။ မေးခွန်းလေးတွေက လွယ်လွန်းလို့ ကိုယ့်သဘောထားကို ဖြေလိုက်ရုံပါပဲ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လေးတော့ ဖြေပေါ့နော်။ ကိုယ့်သဘောထားကို ပြောရတာပဲဟာ။ တော်ကြာမှ တချို့လူတွေ ဖြစ်သလို အီး အဲ မွေးမေလေ့ ညည်းပြီး သူများပြောတာ ကြားမိတာပါ ဆိုသလိုလဲ ဖြစ်နေအုံးမယ်။ Hold the responsibility ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ကိုယ်တာဝန် ရဲရဲယူလိုက်ပါ။ အခုတော့ အိပ်ချင်လို့ အိပ်လိုက်အုံးမယ်။ ပြန်လာခဲ့မယ်။ မဖြေရင် စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတွေကို သက်သေထားပြီး နောက်တခါ ထပ်မေးမယ်။
ပုတီးစိတ်တာ ကောင်းသလား၊ ဆိုးသလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အလွယ်ဖြေရင်တော့ ကောင်းပါတယ်လို့ ဖြေရပါမယ်။ ပုတီးစိတ်ကြတာဟာ အာရုံ၌ စွဲမြဲတည်တံ့စေရန်၊ စိတ်နှိပ်ကွပ် ဆုံးမရန်၊ သတိတရား ချွတ်ယွင်းမှု ကင်းစေရန် စိတ်တယ်လို့ စာရေးသူ ဆရာတိုက်စိုး ရေးသားထားတာကို ကျနော်လည်း လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုက ပေါ့ချင်လို့ ကြောင်ရုပ်ထိုး ဆေးကြောင့်လေး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ရှုတ်ချသလားဆိုရင်လည်း။ ပုတီးစိတ်သူကိုလည်း မရှုတ်ချလိုပါ။
ပုတီးစိတ်သူရဲ့ စိတ်၊ ခံယူချက်ပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ ကျနော် ဒီဆောင်းပါးကို ကူယူရေးရခြင်းဟာ ပုတီးသမိုင်းကို သိရှိရလို့နှင့် မသိသူများ သိနိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းပါ။
တကယ်တော့… စည်းကမ်းအရ.. စာတင်ရင်.. တင်တဲ့သူက. .ခေါင်းဆောင်ပြီး.. တာဝန်ယူဆွေးနွေးရေးရမှာပါ..။
အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်းအများကြီးထွက်ပါတယ်..။ ပုတီးက.. တန်ဆာဆင်အလှအနေနဲ့လည်း သုံးကြတာကိုး.
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတိုင်းလိုလိုရဲ့.. ဘာသာရေးအသုံးပစ္စည်း.. အဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်..။
ကမ္ဘာမှာ ပုတီးစေ့တွေလိုက်စုဆောာင်းသူတွေတောင်ရှိတယ်..။ အမှတ်မမှားရင်.. မြန်မာပြည်မှာလည်း.. ဦးလှဝင်း(လေသူရဲတဦး) ပုတီးစေ့တွေအကြောင်း.. လေ့လာရေးဖူးတယ်..။စုဆောင်းသူဖြစ်တယ်..။
ဆိုတော့.. ပုတီးစိတ်တာကိုပဲ….လူအတွက်.. ကောင်းလား..မကောင်းသလား?.. ဆွေးနွေးချင်သပ ဆိုရင်လည်းရပါတယ်..။
ပုတီစိတ်တာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်.. သင့်မသင့်.. ဆွေးနွေးမလား?.. OK ဖြစ်တယ်..။
ပုတီးကဘယ်ကလာသလည်း.. သမိုင်းကြောင်းလှန်ဆွေးနွေးမယ်ကွ ..ဆိုလည်း..ရပါတယ်..။
ပုတီးဆိုသည်မှာ.. ပုနဲ့တီးပေါင်းထားတာလား.. ဘယ်စာပေကနေမွေးယူသလည်း.. စသဖြင့်..စာအသုံးအနှုံးနဲ့လိုက်ချင်သလား.. ဖြစ်သေးတာပဲ..
ပညာရှင်လို respect ပေးပြီး.. ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့..။
ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာလုပ်ပါရင်.. စာဖတ်သူတွေအကျိုးများပါတယ်..။ လိုချင်သူတွေရလိမ့်မပေါ့..
အဲလိုမဟုတ်ပဲ.. တဖက်သားကို ပုတ်ခတ်စော်ကားပြောချင်တာဆိုရင်တေ့ာ..
သဂျီးရေ သဂျီးပုတီးအကြောင်းကို တော်တော်သိတယ် ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ အဓိကက မဆိုင်တာကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ပြောချင်တာကို ဆောင်းပါးရှင်ကို ပြန်တဲ့ ကွန်မန့်ထဲမှာ အားလုံးပြောလိုက်ပါပြီ။ အော်မေ့လို့ အခုကျနော် တခုမှ မငြင်းရသေးဘူးနော်။ မေးခွန်းတွေ မေးတာနဲ့ ကျနော်က ပြန်ဆွေးနွေးတာပဲ ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေကို သက်သေ လုပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆိုက်မှာ သဂျီးက ခေါင်း ဆိုတော့ သဂျီးက ငြင်းခုံခြင်းအနုပညာတွေ ဘာတွေလုပ်ရင် သဂျီးစကားက အတည်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကျနော်က မငြင်းပဲ အားလုံးကို ကျနော့်အမြင်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတာချည်းပါပဲ။ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတွေကို သက်သေလုပ်ပါတယ်။
အခုမှ ပြန်ရောက်လို့ အခုပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတာလဲ မှန်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ရော uzin ဆိုသူရော သူကြီးရော ကျန်တဲ့စာဖတ်မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးကိုပါ။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာက ဘာလို့မေးခွန်းတွေ ထုတ်ပြီး ဆောင်းပါးရှင်ကို မေးရသလဲဆိုတော့ ကူးတင်တယ်လို့ ပြောတော့ စာရေးသူရဲ့ သဘောထားကို မသိလို့ပါ။ ဒါကြောင့် လေးစားမှုအနေနဲ့ အိမ်ရှင်ကို အရင်မေးပါလို့တောင် ကျန်သူတွေကို ပြောခဲ့တာ မြင်မယ် ထင်ပါတယ်။
မေးခွန်းတွေ မေးစဉ်မှာလဲ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က မေးရင်တော့ ပြတ်ပြတ်သားသား မေးပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေမှာလဲ မိတ်ဆွေတွေကို တယောက်ချင်းကို ပြန်ဖြေတာ ဖတ်ဖူးသူတွေ သိပါတယ်။ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တာကို မေးရင်တောင် ရင်းနှီးသူတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေပါတယ်။ ကျနော် ပြောခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်ပါ သဘောတရားတွေကို မရှင်းရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဘာလို့ ထည့်ပြောတာလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ပညာရှိ အယ်ဒီတာကြီးက သူတပါးကို ပုတ်ခတ်စော်ကား ပြောဆိုချင်တာဆိုရင်တော့ ဆိုပြီးပြောသွားလို့ပါ။ သူက အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းတော့ စကားနည်းနည်း လှည့်လိုက်တာနဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရှင်းအောင် ပြောရတာပါ။ တခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကျနော်က စပြီးတော့ မပုတ်ခတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ ကျနော့်လူမျိုးကို ထိလာရင်တော့ နည်းနည်းပါးပါး မေးခွန်းလေးတွေ ထုတ်ပြီးဆွေးနွေးသလို ဝေဖန်သင့်ရင်လဲ ပြန်ပြီးတော့ ဝေဖန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျိုးအကြောင်းကို ရှင်းအောင် ပြောပြီးမှ ဆွေးနွေးတာပါ။ ဝေဖန်တာလဲ အချက်အလက်နဲ့ လာတာပါ။
ကဲ အခု ပုတီးကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောရရင် စာရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ ပုတီးစိပ်ခြင်းဟာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ သဘောထားကို အရင်ပြောလိုက်ရင် အောက်က ကွန်မန့်တွေတောင် လာမယ်မထင်ဘူး။ အမှန်တော့ စာရေးသူရေးတဲ့ ပုတီးအကြောင်း စာတွေကို ကျနော်ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလဲ မှန်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျူခေတ်ကတည်းက စပြီး စိပ်ပုတီးကို အဆင်တန်ဆာ အနေနဲ့ သုံးနေပါပြီ။ နောက်ပြီး အင်းဝခေတ်ကျတော့ ဘာသာရေး အသုံးအဆောင် အနေနဲ့ သုံးနေပါပြီ။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာမှန်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ နေရာပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူတွေက မန္တာန်ရွတ်ရာမှာ သုံးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဘုရားဂုဏ်တော် ပရိတ်တို့ ရွတ်ဆိုရာမှာ သုံးတယ်။ အဓိကက အသုံးချ ပစ္စည်းအနေနဲ့ သုံးတာပါ။ အကြိမ် အရေအတွက်ကို မှတ်ဖို့ပါ။ ပုတီးမသုံးချင်လို့ ကိုယ့်လက်ကို ပြန်ရေတွက်ပြီးမှတ်တာ စာပေါ်မှာ တုတ်ချောင်းကလေးတွေ ရေးပြီးမှတ်လို့လဲ ရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း hand tally လို့ခေါ်တဲ့ ခလုတ်နှိပ်ရတဲ့ ဟာလေးတွေနဲ့ မှတ်တာလဲ ရပါတယ်။ ဘယ်လို သဘောထားရမလဲ ဆိုတော့ စန္ဒရားဟာ မြန်မာတွေ တီထွင်တာ မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာသီချင်းတီးဖို့ တော့အကူကိရိယာ အနေနဲ့ သုံးနိုင်တယ်။ Calculator ဟာမြန်မာတွေ တီထွင်တာ မဟုတ်ပေမယ့် အတွက်အချက်မှာတော့ မြန်မာရော ကမ္ဘာကပါ သုံးသလိုပေါ့။ ဒီစာပိုဒ်က အဓိကအချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မရှင်းလင်းသူများ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ကိုကြောင်ကြီး အရင်ဆုံး ပြောတာပါ။ ဥပမာ မပေးသွားလို့ ကျနော်က ဝင်ပြီး အားဖြည့်ပေးတာပါ။ ပုတီးကို စွဲလန်းပြီး ကာကွယ်နေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပေါ်က ပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ ထေရဝါဒထဲမှာ ဟိန္ဒူအယူတွေ ဘယ်လောက်ရောနှောနေသလဲ ဆိုပြီး ပြောသွားလို့ပါ။ အဓိကက ထေရဝါဒတခုလုံးကို ပြောချင်ပုံ ရလာတာ တွေ့လို့ပါ။ ဒါက ဟိန္ဒူအယူကို ထေရဝါဒထဲ ထည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Calculator ကိုအတွက်အချက်မှာ တီထွင်သူ မဟုတ်လဲ အကူကိရိယာ အနေနဲ့ သုံးနိုင်ကြောင်း ပြောတာပါ။ ဒါက အယူဝါဒနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ကိလေသာ အာသဝေါကုန်တဲ့ ရဟန္တာမဖြစ်သ၍ လူတွေဟာ တမျိုးမဟုတ် တမျိုးစွဲနေကြတာပဲ။ အနာဂမ်အရိယာတောင် ဥပက္ခာဝေဒနာကိုစွဲလို့ ဗြဟ္မာဘုံမှာ သွားတည်တာပေါ့။ စိပ်ပုတီးကိုလည်း အစွဲတမျိုးအဖြစ် မြင်ကြည့်နိုင်ရင် နေသာထိုင်သာရှိလိမ့်မယ်..။ လူဆိုတာ တခုခုကို စွဲမှ နေသာထိုင်သာရှိတယ်။ ကုသိုလ် အကုသိုလ်စွန့်တယ်ဆိုတဲ့ ဝိပဿနာကျင့်တာတောင် တည်မနေ မစွဲရဆိုတဲ့ ပညတ်ကို အစကနဦးမှာ စွဲရတာပဲ။ နို့မို့ရင် ပုထုဇဉ်တွေ ဘယ်လိုလုပ် နားလည်ပါ့မလဲ။ မြတ်စွာဘုရားလည်း အဲဒီပညတ်အစွဲကိုသုံးပြီး (မစွဲဘဲ) သဗ္ဗေညုတ ရွှေညဏ်တော် ပိုင်ဆိုင်သွားတာ။ သမာဓိတည်အောင် တခုခုကို မစွဲဘဲ ကျင့်နိုင်ကြလို့လား၊ ဝင်လေ ထွက်လေ စွဲသူစွဲ၊ သတိပဌာန်သုံးသူသုံး၊ ကသိုဏ်းရှုသူရှု လုပ်ကြရပါတယ်။ ဝါသနာ အထုံနဲ့ အများကြီးဆိုင်တယ်။ စိပ်ပုတီးကျင့်စဉ်များကို ဂမ္ဘီရ ဝိဇ္ဇာလိုင်းမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးတော့ သမာဓိတည်လာတဲ့အခါ အခြားသမထ အကျင့်များထက် လောကီနဲ့ ပိုနွယ်စရာ အကြောင်းရှိလို့ လောကုတ္တရာအကျင့်နယ်မှာ သိပ်အားမပေးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုတီးဆိုတာ တော်တော်ကောင်းတဲ့ လူ့အသုံးအဆောင်တခုပဲ
အင်း… ဂါထာတွေဘာတွေရွတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂုဏ်တော်ပွားတာလို အနုဿတိပွားရင်ဖြစ်ဖြစ် အရေအတွက်ကို မှတ်သားတဲ့အနေနဲ့လည်း အလွန်အသုံးတည့်ပါတယ်….။
အဲဒီပစ္စည်းဟာ လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ တော်တော်အစပ်တည့်တဲ့ အသုံးအဆောင်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ထက် ကျည်းကန်ရှင်ကြီးရဲ့ အလုပ်မရှိကြောင်ရေချိုးတဲ့ အမေးကိုတော့ တော်တော်သဘောမကျဘူး..။
ဘုရားရှင်ကော ပုတီးသုံးသလား ဆိုတာမျိုးပဲ…။
အဲဒါ နောင်လာနောက်သားတွေ အမြင်ရှင်းစေချင်လို့ မေးပြတယ်ပဲဆိုဦးတော့
ထေရ၀ါဒရဲ့ ဘုရား ဆိုတာကို လုံးလုံးသဘောမပေါက်သူရဲ့ အမေးမျိုးပဲ…။
လေးမဂ်လေးဖိုလ် ဆိုက်ပြီးသား ရဟန္တာကို
သတ္တိံပရိပူရကာရီ = သတိ အရာမှာ အပြည့်အစုံကျင့်ပြီးသူ လို့ ဆိုတယ်။
ရဟန္တာဆိုတာ ကောင်တာ မလိုဘူး..။
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀လောက်က.. ရန်ကုန်ရောက်တုန်း ချမ်းမြေ့မှာတရားသွားထိုင်တော့.. ချမ်းမြေ့ဆရာတော်က.. ပုတီးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. ပြောဟောဘူးတာရှိတယ်..။
လိုရင်းကတော့.. တရားထိုင်ရင်.. ၀င်ထွက်လေကို အာရုံစူးစိုက်တာမှာ.. အာရုံကို ခွဲသွားမိစေမဲ့.. အပြုအမူကို ပယ်တာပါ..။
မရှင်းလို့ပါခင့်ဗျ သူကြီးရေ တစ်ခေါက်လောက် သေချာလေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
လေးလုပ်ပါ့ဦး ကွန်မန်းများကိုလဲ လေ့လာ အားပေးသွားပါကြောင်း